फेसबुक एप चलाउनु हुन्छ ? जान्नुहोस् के गर्छन फेसबुक एपहरुले – Gulminews
Home/प्रविधी/फेसबुक एप चलाउनु हुन्छ ? जान्नुहोस् के गर्छन फेसबुक एपहरुले
फेसबुक एप चलाउनु हुन्छ ? जान्नुहोस् के गर्छन फेसबुक एपहरुले
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७४ श्रावण १९, बिहीबार १३:५४ मा प्रकाशित
“तेस्तोनि” (testony) भन्ने फेसबुक एप अहिले धेरै चर्चामा छ। कति धेरैले जानेर वा नजानेर चाहिने भन्दा बढी प्रयोग गरेको र शेयर गरेको देखिरहेको छ। यो एउटा उदाहरण मात्र हो। यो र यस्ता खालका कुनै पनि फेसबुक एपहरु चलाउदा त्यो एपले तपाइको व्यक्तिगत सूचना (Personal Information/data) लिएको हुन्छन । कत्तिको ख्याल गर्नु भएको छ पहिलो पटक यस्ता एप चलाउदा तपाईलाई सोधेको हुन्छ “तपाइंको यो यो सूचना यो एपले लिन्छ, दिन चाहनुहुन्छ ?“
(testony.com will receive:
your public profile and email address.)
यो एक खालको ब्यबसाय हो। एउटा त बिज्ञापनहरु राखेर कमाउछन। त्यसमाथि के सम्म पनि हुन सक्छ भने तपाइंको सूचना जस्तै इमेल ठेगाना वा फोन नम्बर कतै प्रत्यक्ष वा अप्रतक्ष बेचिएको वा (अनधिकृत) प्रयोग गरिएको पनि हुन सक्छ र त्यसबाट उनीहरुलाई फाइदा हुन्छ । तर तपाईले केहि पाउनु हुन्न । बरु इमेल र कहिले कहिँ मोबाइलमा समेत तपाइले नचिनेको वा नजानेको ठाउँबाट मेसेजहरु आउन सक्छन । अझ तपाइंको फेसबुक एकाउन्ट ह्याक हुने चान्स पनि बढेर जान्छ।
त्यसैले यी र यस्तै खालका एपहरु रमाइलोको लागि मात्र चलाउने भन्दा पनि त्यसले के कसरी काम गर्छ भनेर थाहा पाउनु जरुरि छ। चलाउनुस र रमाइलो गर्नुस तर यो जानकारी चाही लिनुहोस् ।